ဘဝမှတ်တိုင်: Touch စနစ်သုံးဟန်းဆက်များ ရေဝင်၊ ရေစိုပါက ဘက်ထရီကို ချက်ချင်းဖြုတ်ထားသင့်ပြီး သတိထားပြုပြင်ရန်လို
Touch စနစ်သုံးဟန်းဆက်များ ရေဝင်၊ ရေစိုပါက ဘက်ထရီကို ချက်ချင်းဖြုတ်ထားသင့်ပြီး သတိထားပြုပြင်ရန်လို
သင်္ကြန်ကာလအတွင်း ဟန်းဆက်ကိုင်ဆောင် အသုံးပြုသူများအနေဖြင့် ရေဝင်ခြင်း၊ ရေစိုခြင်းများဖြစ်လာပါ က မည်သည့် Touch စနစ်အမျိုးအစား ဟန်းဆက်မဆို ဘက်ထရီ ချက်ချင်းဖြုတ်ထားသင့်ကြောင်း ဆားဗစ်ပညာရှင်တချို့ မှ အကြံပြုပြောကြားသည်။
“ရေစိုခံ အိတ်သုံးထားရက်နဲ့ ရေဝင်တယ်ဆိုရင် ဟန်းဆက်ကို ဘက်ထရီ ချက်ချင်းဖြုတ်ထားတာ အကောင်းဆုံးကာကွယ်တာပါပဲ။ ဖြုတ်လို့ရတဲ့ SIM ကတ်တို့၊ မက်မိုရီကတ်တို့ကအစ အရင်ဖြုတ်ထားရင် ပိုကောင်းပါတယ်။ တချို့ဘက်ထရီ ဖြုတ်လို့မရတဲ့ ဟန်းဆက်တွေဆိုရင်တော့ စမ်းသပ်မှုအမျိုးမျိုး မလုပ်ဘဲ နီးစပ်ရာဆားဗစ်ဆိုင်ကို အမြန်ပို့တာက ပိုပြီးစိတ်ချနိုင်ပါတယ်။ ဟန်းဆက်ကို ဒီအတိုင်း ပါဝါပိတ်ထားလို့ ရှိရင် အလုပ်မလုပ်တော့ဘူးလို့ တချို့က ထင်ကြတယ်။ ဒါပေမဲ့ ဟန်းဆက်ရဲ့ ဆားကစ်ပြားကို တိုင်းကြည့် ရင် Volts တွေ ရှိနေတာတွေ့ရလိမ့်မယ်။ ဒီတော့ ဘက်ထရီဖြုတ်လို့ရလို့ ဖြုတ်ထားလိုက်ရင် ဆိုင်မှာ သွားပြင်တဲ့အခါ ပြန်ကောင်းဖို့ ရာခိုင်နှုန်း တော်တော်များပါမယ်” ဟု Techvilla မှ ဆားဗစ်ပညာရှင်တစ်ဦး က အကြံပြုပြောကြားသည်။
“တချို့က ဟန်းဆက်ရေဝင်ရင် ဆန်အိုးထဲ ထည့်တာတို့၊ ဆံပင် အခြောက်ခံစက် (Hair Dryer) နဲ့ ဒီအတိုင်းမှုတ်တာတို့ ကိုယ့်ဟာကိုယ် လျှောက်လုပ်ကြတော့ နောက်မှပိုပျက်ပြီး ဆိုင်လာပြင်တာတွေ ပိုတွေ့ရတတ်တယ်။ ဆန်အိုးထဲထည့်လို့ မျက်စိအမြင်မှာ စကရင်မှာ ရေမရှိတော့ပေမဲ့ ဆန်မှာပါဝင်တဲ့ အမှုန့်လေးတွေက ရေနဲ့ရောပြီး ဆားကစ်မှာ ရွံ့ကပ်သလိုမျိုးတွေဖြစ်ပြီး ဟန်းဆက်ဆားကစ် ပျက်စီးတတ် ပါတယ်။ တချို့က ဟန်းဆက်ကို ဒီအတိုင်း ဘက်ထရီလေးဖြုတ်ပြီး Dryer နဲ့ မှုတ်တာမျိုးတွေကြောင့် Touch နဲ့ Display ထိတောင် ပျက်စီးတတ်ပါတယ်” ဟု ဆားဗစ်ဆရာတစ်ဦးဖြစ်သူ ကိုမျိုးကပြောသည်။
“ရာသီဥတုက တော်တော်လေးပူနေတော့ တချို့ဆို ဟန်းဆက်ရေစို/ ရေဝင်လို့ နေပူထုတ်လှမ်းရာကနေ အပူချိန်များပြီး Touch Display တောင် ကြောင်သွားတတ်တာမျိုးလည်း မနှစ်က သင်္ကြန်မှာဖြစ်ကြတာတွေ ရှိတယ်။ အထူးသဖြင့် ရေစိုခံအိတ်ထည့်ထားတယ်ဆိုပြီးတော့ ၁၀၀ ရာခိုင်နှုန်း စိတ်ချလို့ မရဘူး။ ရေစိုခံ အိတ်အပြင်ဘက်မှာ ရေစိုနေပြီးတော့ အပူချိန်အရမ်းများရင် ရေငွေ့ပျံပြီး အိတ်အတွင်းဘက်ကို ရေ ခိုးရေငွေ့အဖြစ်ပြောင်းပြီး ဝင်သွားတတ်တာကြောင့် ရေစိုခံအိတ်အပြင်ဘက်ကိုလည်း ဂရုစိုက်ပြီး ရေ စင်အောင် မကြာခဏ ပြုလုပ်ထားဖို့ လိုအပ်ပါမယ်” ဟု TECHVILLA မှ ဆားဗစ်ပညာရှင်က ထပ်မံ အကြံပြု ပြောကြားသည်။
ယခင်နှစ်သင်္ကြန် ကာလပြီးဆုံးသွားတိုင်း ဆားဗစ်ဆိုင်များသို့ ဖုန်းဟန်းဆက်အများအပြား ရေ ဝင်ခြင်းကြောင့် ရောက်လာခဲ့ကြပြီး အချို့မှာမူ ကိုယ်တိုင်နားမလည်ဘဲ စမ်းသပ်ပြုပြင်ခြင်းများကြောင့် လုံးဝပျက်စီးသွားကာ သုံးမရတော့သော အခြေအနေ ရောက်သွားသော ဟန်းဆက်အချို့များပင် ရှိခဲ့ကြောင်း မန်းမိုဘိုင်း ဆားဗစ်သမားထံမှ သိရှိရသည်။ သင်္ကြန်ကာလ ဟန်းဆက်များ ပြင်ပယူဆောင် အသုံးပြုလိုသူများအနေဖြင့် အထူးသတိပြုရန် လိုအပ်ပြီး ရေဝင်လာပါက ကြားဖူးနားဝ လက်တွေ့စမ်း သပ် ပြုပြင်ခြင်းများ ရှောင်ရှားသင့်ပြီး အနည်းဆုံး ဟန်းဆက်ဘက်ထရီ၊ ဆင်းကတ်၊ SD ကတ်များကို အစောတလျင် ဖြုတ်ထားသင့်ကာ နားလည်သူများဖြင့် အမြန်ဆုံးပြုပြင်သင့်ကြောင်း ဆားဗစ်ဆရာတချို့မှ အကြံပြု ပြောကြားခဲ့သည်။
စာရေးသူ kyawsan အချိန် 4/01/2014 09:52:00 pm
Credit...By Mgmin LukaLay C8815 အတွက် Tool တွေအကုန်လုံးကိုစုစည်းပေးထားပါတယ်ခင်ဗျာ..Network Unlock Fix နှင့် Step2Fail ...
Android စမတ်ဖုန်းတွေကို Galaxy S5 အဖြစ် ပြောင်းလဲေ...
Acer က Iconia One7နှင့် Iconia Tab7Tablets မျာ...
ကွန်ပျူတာ နည်းပညာ စာအုပ်များ....
Chess Master 2014 14.04.28 APK (Update Version)
✔Pdf Maker v1.1 For Amdroid✔
ColorNote Notepad Notes Version: 3.9.51 (Update Ve...
Viber 4.3.1.21 (For Android)
Custom Rom ဆိုတာ ဘာလဲ ?
ပန်းချီရေးရာနှင့် ပုံဆွဲ အခြေခံများ (မြန်မာလို)
ရှောင်ရှားသင့်တဲ့ ကွန်ပျူတာ အမှားများ
GalaxSim Unlock 2.5.0 APK (Update Version)
★★RAR for Android Version : 5.10.build14 Apk (All ...
Firmware တင်နည်းစာအုပ် ( ၈ ) အုပ်
Nokia X USB Driver For Windows XP,7/8 (32Bit-64Bit...
✔Image2 App v1.06 For Android✔ (ပုံတွေကို Apk လုပ်...
Movavi Video Converter 14.3.0 With Patch Full Vers...
Vault Premium v5.0.04.22 APK (Premium Version)
Viber Flashlight Notification (For Android)
Root_Toolbox_PRO_3_0_3.apk (Update Version)
Computer_0_34_b44_Beta.apk -3MB
Firmware တင်နည်းများ စုစည်းမှု (မြန်မာလို E-Book)
Lenovo ကအသစ်မိတ်ဆက်လိုက်တဲ့ Lenovo Vibe Z Phablet
Window7 Download link တွေသိမ်းထား ချင်ရင်
Myanmar Exchange Rate Converter (For iphone,ipad)
360 Security – Antivirus FREE 1.8.0 APK
Mobile Knowledge (မိုဘိုင်းဖုန်းအသုံးပြုလျှင် သတိထ...
iPhone အားကြိုးမဲ့အားသွင်းနိုင်သော Wireless Charge...
Oppo find5ကို Root လုပ်ခြင်း
ခရစ်စတယ်ကျောက်များဖြင့် ဖန်တီးထားသည့် Samsung Gala...
Galaxy S6 နှင့် Galaxy Note5တို့တွင် ကွေးညွှတ်နို...
Samsung Phone များတွက် CWM Recovery များ
10 Android Apps 1 click Download
★★Android-Wifi-Tether New Version -3.3 Beta2Apk ...
Android Phone + Tablet တွေ မိမိထဲက အရေးကြီးတဲ့ Dat...
Launcher အသစ်အဆန်းသုံးချင်သူများအတွက် - Turbo Laun...
ဖုန်းထဲမှာ ပြန့်ကျဲနေသမျှဖိုင်တွေ ပြန်စီပေးမယ့် Di...
Hacking နှင့်ပတ်သက်သမျှ အင်္ဂလိပ်-မြန်မာ EBook ၄၅ အု...
Note2(N7100) Offiical 4.4.2 တင်ပြီး Root လုပ်မယ်...
Samsung Updates v1.2.5 (For Android)
Videoder v.7.0.0 (For Android)
✔ကို​ဇော်​သွင်​(သတင်းစုံ)Apk v1.0 For Android✔
Telenor ဆင်းမ်ကတ် အသုံးပြုသူများ၏ အချက်အလက်များကို...
Adobe Reader Current Version 10.6.0 For Android (L...
Android OS 4.3 ROOT v1.2.0 APK
Clean Master v5.3.1 (For Android)
★★ Chief Architect Premier X6 16.2.0.47 (Win 32) F...
★★ AV Media Player Morpher Plus 6.0.18 + Key Full ...
✔Mirror Apk v1.0.7 For Android✔
Facebook V 8.0.0.26.24 For Android(latest version)...
အင်တာနက် ဖွင့်သုံးနေစဉ် Viber ကို offline လုပ်ထားန...
Samsung Phone က ဘက်ထရီမခံလို့ စိတ်ညစ်နေသူများအတွက်...
ဖုန်းပြောရင်း ချစ်သူကို သီချင်းဖွင့်ပြမယ့် APK
Note3အတွက်
iOS 7.1.1 Download Touch ID improvements and bug f...
Android Phone / Tablet တွေအတွက် MMComplex လို့ ခေါ်...
Huawei windows phone Myanmar ထည့်မယ်
★★Smart Auto Call Recorder Version : 1.0.25 Apk (A...
ရွှေစင်မိုး အခြေခံဝေါဟာရ အင်္ဂလိပ်စာ (For Android)
ရွှေအိုရောင် Batter Saver လှလှလေး - Deep Sleep Batt...
Internet Lock 1.1 APK (Update Version)
FriendCaster Pro for Facebook v5.4.5 for android(l...
iphone, ipad, ipod တွေမှာ Cydia icon ပျောက်သွားသူမ...
Galaxy S3 LTE( GT-I9305) jellybean 4.1.2 အား root ...
တရုတ်ဖုန်းတွေကို အလွယ်တကူ Root နိုင်တဲ့ China Root...
Root_App_Delete_help_Root_7_0_0.apk -4MB
Published On: Sun, Apr 20th, 2014 Android OS appli...
IOS 7.1 (iphone, ipod, ipad) များအတွက် JB မလိုပဲ M...
ဗုဒ္ဓဘာသာဝင်များလေ့လာသင့်တဲ့ ဗုဒ္ဓ၀ါဒပေါ်ထွန်းခြင်း P...
Contacts နဲ့ Dialer တွေကို စတိုင်အလန်းနဲ့ပြောင်းနိ...
RAR_for_Android_5_10_build15.apk -3MB
PhotoWonder v.3.1.6 (For Android)
Smart Magnifier (V1.0) Apk
Apple, Google, Microsoft, Samsung နှင့် Carrier မျ...
Facebook တွင် လုံခြုံစိတ်ချစွာ ရှိနေဖို့အတွက် အကြံ...
ဖုန်းပြင်သမားများအတွက်ပါHuawei Ascend G510 hard re...
ဖုန်းပြင်သမားများအတွက်ပါဗျာORT-JTAG - Huawei U8230...
★★ OfficeSuite Pro7(PDF& Fonts) v7.4.1803 APK (A...
Girl With Hula Hoop Livewallpaper
iFont v.4.1(For Android)
Myanmar Map (For Android)
PAPER APEX/NOVA THEME v1.2 APK
Android ဖုန်းတွေအတွက် နောက်ဆုံးထွက် Facebook 10.0....
Minimal ( Hera ) - Icon Pack v1.0.4.2 APK
ဖုန်းခေါ်ဆိုသူရဲ့ပုံကို Screen အပြည့်ပြပေးမယ့် - BI...
Next_Launcher_3D_Shell_3_10.apk - For android
Android1.6 ကနေ 4.4 ထိ Root နိုင်တယ်ဆိုတဲ့ KingRoot...
အလွယ်ဆုံးငွေစစ်မယ် ငွေဖြည့်မယ် အင်တာနက်လျှောက်မယ် ...
WordPress v.2.7.3 (For Android)
ရေဝင်ခြင်းကြောင့် ဖြစ်တတ်တဲ့ Huawei G610 U00 ဖုန်း...